Saturday 11th February come and celebrate with us french Langages and Culture! Daily activities for families foraspecial day about Paris!
Free entrance, from 10am to midnight.
No need to speak French, just come and have fun!
10.00 am – 2.00 pm | LE PETIT MARCHE
French Food tasting, handicraft, tales, associations, french classes initiation, face makeup for kids
1.00 pm | DICTEE D’OR
The great dictation competition is back ! Participate in one of our categories and getachance to win one of our special prize !
ALL THE AFTERNOON
Boarding game, Tango, Capoeira, activities for children
5.00pm | CRAZY PONY SHOW
6.00 pm | LES BOGOSS FONT LEUR SHOW
6.30 pm | SINGING CONTEST
Solo or asagroup, participate to the singing contest and win prizes !
9.00pm | CONCERT LES OGRES DE BARBACK
10.00-midnight | DJ Set Special Francophone
For registration, please to detail in the email the competition (dictation, singing contest, petanque) : reservation@institutfrancais-birmanie.com
ပြင်သစ် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စကားပြောနေ့ပွဲတော် ၂၀၁၇
ပြင်သင်ဘာသာစကားနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကို လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက် (စနေနေ့)မှာ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူ လာရောက် ဆင်နွှဲလိုက်ပါ။ မိသားစုများအတွက် ပါရီမြို့ပုံစံ ထူးခြားတဲ့ အခင်းအကျင်းနဲ့ တစ်နေတာ အစီအစဉ်များ ပါရှိမှာပါ။
ဝင်ကြေးအခမဲ့။ | မနက် ၁၀နာရီမှ ညဉ့်နက်အထိ။
ပြင်သစ်လို ပြောတတ်စရာ မလိုပါဘူး မိတ်ဆွေ။ ပျော်ရအောင် အရောက်သာ လာခဲ့ပါ။
မနက် ၁၀နာရီ မှ နေ့လယ် ၂နာရီ | ဈေးတန်းငယ်
ပြင်သစ်စားသောက်ဖွယ်ရာများ မြည်းစမ်းကြည့်ခြင်း၊ လက်မှုပစ္စည်းများ၊ ပုံပြင်များ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ပြင်သစ်အတန်းများ အစပြုခြင်း၊ ကလေးများအတွက် မျက်နှာမိတ်ကပ် လူးခြယ်ခြင်း။
နေ့လယ် ၁နာရီ | စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံပြိုင်ပွဲ
စားလုံးပေါင်းသတ်ပုံပြိုင်ပွဲကြီး ပြန်လာပါပြီ။ ပြိုင်ပွဲကဏ္ဍတစ်ရပ်ရပ်မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အထူးဆုတစ်ခုခုကို အရယူလိုက်ပါ။
ဘုတ်ဂိမ်းများ၊ တန်ဂိုအက၊ Capoeira အကနှင့် ကလေးများအတွက် အစီအစဉ်များစွာ။
၅နာရီ | CRAZY PONY တင်ဆက်မှု
၆နာရီ | LES BOGOSS FONT LEUR တင်ဆက်မှု
၆နာရီ ၃၀မိနစ် | တေးဆိုပြိုင်ပွဲ
တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲလိုက်ဖြစ်စေ တေးဆိုပြိုင်ပွဲများမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဆုတွေ အရယူလိုက်ပါ။
ည ၉နာရီ | မြန်မာ-ပြင်သစ် ဂီတပူးပေါင်းဖန်တီးတင်ဆက်မှု
မြန်မာဂီတပညာရှင်များနှင့် ပြင်သစ်သံစုံချန်ဆန် LES OGRES DE BARBACK အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်သွားမှာပါ။
ည ၁၀နာရီ မှ ၁၂နာရီ | အထူး ဖရန်ကိုဖုန်း DJ
ပြိုင်ပွဲများအတွက် စာရင်းပေးရာ အီးမေးလ်၌ (သတ်ပုံပြိုင်ပွဲ - dictée d'or၊ တေးဆိုပြိုင်ပွဲ - concours de la chanson နှင့် ရိုးရာပေတွန်းရိုက်ပြိုင်ပွဲ - Pétanque) စသဖြင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြပြီး reservation@institutfrancais-birmanie.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။